Indlela yokukhetha iibinotyhulasi: iingcebiso ezilungileyo kunye namaqhinga | I-Network Meteorology
IsiJamani sasePortillo | 09/06/2022 10:00 | Ukwahlulahlulahlula
Imakethi ibonelela ngekhathalogu ebanzi yeebinotyhulari apho sinokuthelekisa kwaye sikhethe ezona bhayinotyhulas zingcono kwiinkqubo ezahlukeneyo ezibandakanya ukubukela iintaka, ukukhwela isikhephe, ukukhempisha, ukuzingela, ezemidlalo, iikonsathi, ukucupha, i-astronomy, kunye nokunye. Ukufunda indlela yokukhetha ibhayinotyhulasi inokuba nzima ngandlel’ ithile. Nokuba zithini na iimfuno zomsebenzisi, kukho iibhayinotyhulayi ezinoyilo olululo kunye nokusebenza ngokwenjongo yazo. Ukukhetha i-binoculars ezifanelekileyo kakhulu, kufuneka sithathele ingqalelo izinto ezahlukeneyo ezifana nokusingqongileyo, ukhetho oluthile, imisebenzi, njl.
Ngenxa yesi sizathu, siza kunikezela eli nqaku ukukuxelela indlela yokukhetha iibinoculars, iimpawu zabo kunye nokubaluleka.
1 Indlela yokukhetha iibinotyhulasi
1.2 Idayamitha yelensi yenjongo
1.4 Indawo yokuJonga (FOV)
1.5 Ilensi/umgama wamehlo
1.6 Ubuncinci ubude bojoliso
Ukukhanya kunye nokucaca kwemifanekiso ebonwa nge-binoculars, ngokukodwa, inqunywe yizinto ezahlukeneyo. Ukwandiswa, unyango lwe-lens kunye nobubanzi benjongo zezinye zezinto ezichaphazela ukusebenza kwebhayinotyhulasi.
Nangona kunjalo, umgaqo osisiseko weebinotyhulasi ngumgangatho wazo obonakalayo. I-Celestron lixabiso lemali ye-brand enikezela nge-optics esemgangathweni ophezulu ngokubonga kwiiglasi ezikhethwe ngononophelo kunye nonyango lwamehlo, iinkqubo ezichanekileyo zokuvelisa kunye nokulawula umgangatho obanzi.
Ukwandiswa liqondo lokwandiswa kwento ebonwayo. Umzekelo, kwi-7x42 binoculars, inani lesi-7 lithetha "ukwandiswa kwesixhobo." Iibinotyhulasi ezi-7x zikhulisa izinto izihlandlo ezisi-7 xa zithelekiswa neliso lomntu. Ukwandiswa kuchaphazela ukuqaqamba komfanekiso, ngoko okusezantsi ukwandiswa kweebhayinotyhulathi, kokukhona umfanekiso uya kuqaqamba. Njengomgaqo oqhelekileyo, ukwanda kokwandiswa kuphumela kwintsimi encitshisiweyo yokujonga.
Idayamitha yelensi yenjongo
I-lens yenjongo ye-binoculars ibekwe ngaphambili kwaye inobukhulu obukhulu. Ububanzi (kwimillimeters) yenye yeelensi luphawu lwesibini lwenani lebhayinotyhulathi. Kule meko, I-7x42 ibhayinotyhulayi inenjongo yobubanzi obuyi-42mm. Idayamitha yelensi yenjongo imisela isakhono sebhayinotyhulasi yokuqokelela ukukhanya, ngoko ke ubukhulu bedayamitha, kokukhona uqaqamba kwaye uthambile umfanekiso. Oku kuluncedo ngakumbi kwiimeko eziphantsi zokukhanya kunye nasebusuku.
Oku kunokukhokelela ekubeni ucinge ukuba ubukhulu obukhulu, isixhobo esingcono, kodwa eneneni, ububanzi be-lens kunye nezinye iiparameters ezifana nomfundi wokuphuma kunye nokusetyenziswa kweebhinotyhulathi kufuneka ziqwalaselwe ekumiseni ezona parameters zifanelekileyo.
"Umfundi ophumayo" unokuchazwa njengobubanzi, kwiimilimitha, zokukhanya okuphuma kwi-eyepiece ye-binoculars. Ubukhulu bomfundi ophumayo, kokukhona umfanekiso ophumayo uqaqambe. Ukuba nomfundi omkhulu ophumayo kwenza kube lula ukujonga ebusuku kunye nokukhanya okuphantsi. Kwizicelo zeenkwenkwezi, i-pupil exit ye-binoculars kufuneka ilingane neqondo apho umfundi obukeleyo anweba njengoko eziqhelanisa nobumnyama.
Ukubala umfundi ophumayo, yahlula i-diameter yenjongo nge-magnification factor. Umzekelo, i-7x42 binoculars inomfundi ophumayo oyi-6mm.
Indawo yokuJonga (FOV)
Indawo ebonakalayo ngebhayinotyhulari ibizwa ngokuba yinkalo yokujonga. Intsimi yokujonga idla ngokuboniswa ngaphandle kwebhayinotyhulasi kwaye ilinganiswa ngeedigri. Umgca womgca wokujonga indawo ebonakalayo kwiiyadi ze-1000 (i-915 yeemitha), ilinganiswe ngeenyawo. Indawo enkulu yokujonga iguqulela kwindawo enkulu ebonwa ngeebinotyhulari.
Intsimi yokujonga inxulumene nokwandiswa, ukuphakama okuphezulu, intsimi yokujonga encinci. Ngaphezu koko, intsimi enkulu yokujonga iphumela ekunciphiseni umgama wamehlo / wamehlo. Ububanzi bombono buluncedo kwiimeko apho izinto zihamba. Ukubala umgca womgca wokujonga, phinda-phinda i-angle yendawo yokujonga ngo-52,5. Ngokomzekelo, i-binoculars enebala lokujonga i-8o igubungela umgca we-linear view of view of 420 feet (126 metres).
Le ngcamango ibhekisela kumgama (ngeemilimitha) ukuba i-binoculars inokwahlulwa kwiliso ngelixa igcina ibala elitofotofo lokujonga. Abanxibi be-Spectacle baya kuzuza kwimigama emide.
Ubuncinci ubude bojoliso
Ingumgama phakathi kweebhayinotyhulathi kunye neyona nto isondeleyo enokuthi igxininiswe ngelixa igcina umfanekiso omhle.
Ukukwazi kwebhayinotyhula ukubamba nokusasaza ukukhanya okwaneleyo ukuvelisa umfanekiso oqaqambileyo, ocacileyo bumisela ukuqaqamba kwayo. Ukukhanya kwebhayinotyhulasi nako kwandisa umahluko phakathi kwemibala kumfanekiso ojongwe.
I-Relative Brightness Index (RBI), i-Twilight Index kunye ne-Relative Light Efficiency (RLE) zi izalathisi eziqhele ukusetyenziswa kushishino lwebhayinotyhula, kodwa kwiimeko ezininzi aziqondwa kakuhle okanye ziingcamango ezingenantsingiselo.
Ukukhanya yingcamango yokuqwalasela xa ukhetha i-binoculars, kodwa akuyona into ebaluleke kakhulu.
Ukuqaqamba kuxhomekeke kwiiparamitha eziliqela, kuquka ububanzi benjongo, ukwandiswa, uhlobo nomgangatho weglasi esetyenzisiweyo, ukusetyenzwa kwe-optics, kunye nodidi lweprism esetyenzisiweyo. Ngokubanzi, ububanzi obukhulu, amandla aphantsi okanye aphakathi, iilensi ezigcwele ngokupheleleyo iilensi zifanelekile.
Iiprism kwiibinotyhulasi zisetyenziselwa ukuguqula imifanekiso kwaye ize kwiindlela ezimbini: uphahla kunye nepali. Iiprism zophahla zikhaphukhaphu kwaye zixinene ngakumbi ngoyilo. Iiprism zibizwa ngokuba yi-BK7 (borosilicate) kunye ne-BaK-4 (iglasi ye-barium). Zombini zitshiphu kwaye zisebenza kakhulu. Iglasi yomyili ye-BaK-4 inoxinaniso oluphezulu (isalathiso sokuphinda sigqame) esisusa ukukhanya kwangaphakathi, okukhokelela kwimifanekiso ecacileyo.
Umahluko liqondo apho izinto ezimbini ezikhanyayo nezimnyama zahluke ngayo kwimvelaphi yomfanekiso. Umahluko ophezulu unceda ukubona izinto ezibuthathaka kunye nokuqonda iinkcukacha ezintle. Umahluko uchatshazelwa sisisombululo.
Okukhona isisombululo siphezulu, kokukhona umahluko uphezulu. Umgangatho ophezulu wokulungiswa kwe-optical ubonelela ngemifanekiso ephezulu eyahlukileyo. Ezinye izinto ezichaphazela umahluko kukungqubana, ukubhuduzela komoya, nomgangatho weenjongo, iiprism, kunye nezixhobo zamehlo.
Ndiyathemba ukuba ngolu lwazi unokufunda ngakumbi malunga nendlela yokukhetha i-binoculars kunye nento omele uyithathele ingqalelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Meteorology yenethiwekhi » Zemozulu » Ukwahlulahlulahlula » Indlela yokukhetha iibinotyhulasi
Iinguqu ezinkulu zemozulu kwimbali yoMhlaba